3 daweynta turmeric ee maqaarka caafimaadka leh - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RESAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah »3 daweynta turkey ee maqaarka caafimaadka leh - Hagaaji caafimaadkaaga
3 Turmeric Daweynta Maqaarka Caafimaadka leh - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Ma ogtahay in qaar ka mid ah daweynada cirridku ay faa'iido u yeelan karaan maqaarka? Tani waxay u egtahay tufaax la yaab leh oo wanaagsanaaya bogsiin wanaagsan oo ka dhigi karta daaweyn aad u fiican xaalado badan.
Daawooyinka noocan oo kale ah waxay noqon kartaa hab fudud oo dabiiciga ah oo lagu hagaajinayo, tusaale ahaan, finan, sawir gacmeed ama alopecia. Ogow sida loo diyaariyo oo loo isticmaalo talaabo tallaabo tallaabo ah.
Daweyno leh cayayaanka
Turmeric (Curcuma wakhti dheer) waa baayacis aad u caansan oo ku jira dhuunta dhaqamada badan. Marka lagu daro midabka huruudka ah, oo kor u qaada dhadhanka iyo muuqaalka suubashadayada, waxaa sidoo kale loo yaqaanaa antioxidant, anti-bararka iyo guryaha antimicrobial. Turmeric sidoo kale waxay ka caawisaa ka hortagga kororka unugyada buro.
Iyada oo darajooyinkan xooggan, daaweynta qurubyada qaarkood waxay noqon kartaa hab wax ku ool ah oo dabiici ah si loo hagaajiyo dhibaatooyinka maqaarka. Fure u ah daaweyntani waa curcumin, qaybta firfircoon ee ka shaqeeya labada dhinac iyo hadal ahaanba.
Daraasaddan, macmacaanka waxaa loo tixgeliyaa si wax ku ool ah daaweynta xaaladaha guud sida:
Cagaarshowga cambaarta ah
Sidoo kale akhri: Curcumin waa mid waxtar leh, haddii aan ka badneyn daawooyinka 7
Midka ugu horreeya ee daaweynta cirridka ah ee ka soo horjeedafinan wuxuu ku saleysan yahay on dabeecada anti-bararka iyo anti-bakteeriyada ee this bislayn. Intaa waxa dheer, daraasado qaarkood waxay faahfaahinayaan saameyntooda xaaladdan.
Cilmi-baarista la soo xigtay ayaa xaqiijiyay waxtarka leh ee codsiga kareemka iyadoo ku saleysan soosaaridan rhizome. Gaar ahaan, waa suurtogal in la wuxuu xakameynayaa dheecaanka xad-dhaafka ah ee sebum ee dadka qaba finanka iyo dhibaatooyinka la xiriira".
1 shaaha macmacaan (5 ml)
½ koob oo ah jalaska halbowlaha (100 g)
Si aad u diyaariso daaweyntan, si fudud u labalabee labada maaddooyinka si fiican ilaa inta lafiirtuna ay si buuxda u kala daadanayso aloe vera jel.
Waxaan kugula talineynaa inaad ku hayso qaboojiyaha. Intaa waxaa dheer, haddii daaweyntu ay qabow tahay, waxay sii xoojin doontaa saameynteeda xasaasiga ah iyo saameynta anti-bararka.
Aroortii subixii, ka dib marka aad maydho oo aad nadiifiso maqaarka, iyo fiidkii intaadan sariirta aadin.
Haddii ay maqashadu ka baxdo maqaarka adiga ayaa ku dhibaya, waxaad codsan kartaa keliya habeenkii.
2. Sawiridda wajiga
Le sawiridda wajiga wuxuu ka kooban yahay maqaarka maqaarka sababtoo ah qorraxda. Si loola dagaallamo loogana hortago gabowga gabowga, waxaan isticmaali karnaa antioxidants, gudaha iyo dibadda.
Sidaa darteed, marka lagu daro in la cuno cunto caafimaad leh khudaarta iyo khudaartawaxaan isticmaali doonaa muusigeena muusikada heerkulka sare. Waxaa intaa dheer, waxaan kudhifeyn doonaa Fitamiin E, oo kale oo leh antioxidant xoog leh.
½ koob oo fiitamiin E (100 ml)
Isku qas saarista faashadda leh vitamin E.
Ku kaydi weelka opaque ee qaboojiyaha si looga hortago oksaydhka.
Codso adigoo si tartiib ah u miisaanka wejiga oo dhan.
Habeenkii oo dhan ha iska daayo subaxdii.
Sidoo kale akhri: 5 siyaabaha loo isticmaalo kiniiniga E vitamin E ee maqaarkaaga
Thealopecia waa cudur si weyn u saameeya kalsoonida ragga iyo dumarka. In kasta oo ay adag tahay in la joojiyo, dawooyinka leh ciriiriga iyo maaddooyinka kale ee daawooyinka ah ayaa ka caawin kara ka hortagga ama dhimista.
2 shaaha shaaha laga sameeyey (10 ml)
¼ koob oo cabitaan dabacase ah (62 ml)
¼ koob saliid ah (60 ml)
Marka hore, isku walaaq habka qurubka leh ee jiiska xawaashka aloe.
Ka dibna ku darsaliidda miraha iyo isku dhafka.
Ugu dambeyntii, ku dar juice karooto iyo emulsify wax kasta si loo isku qasan yahay textures kala duwan.
Ku hayso qaboojiyaha ilaa toddobaad ama ka yar.
Ku darso xannaaneynta maqaarka oo dhan, markaad maskaxdana si fiican u dhex gasho.
Tag ugu yaraan nus saac. Isku day inaad nasato habeenkii waa waxa ugu fiican ee la sameeyo. Mid ayaa u isticmaali kartaa ulajeedkan khaanadda qubeyska iyo tuwaal.
Daawee 2 ama 3 toddobaadkii hal mar.
Waad ogtahay 3 daaweyn hufan oo hufan oo gacan ka geysan kara hagaajinta dhibaatooyinka maqaarka. Xaalad waliba, waxaan had iyo jeer kugula talineynaa booqasho ku yimi maqaarka si aad u xalliso dhammaan shaki kasta.
5 daaweyn ballaaran oo ka hortag ah oo soo kabsasho leh
5 daaweyn ballaaran oo ka hortag ah oo soo kabsasho leh. Qaadashadani waxay noqon kartaa qayb ka mid ah waxyaalaha ugu fiican si loo abuuro xalal dabiici ah oo dabiici ah oo dabiici ah. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/3-traitements-au-curcuma-pour-une-peau-saine/
Dareemida cagaha guban: 5 Daawooyinka dabiiciga ah - Hagaajinta Caafimaadkaaga